Toban meelood oo bakhaariyada Cydia ah waa inaad iskudaydaa iOS 8.4 | Wararka IPhone
Wararka IPad | | Cydia, Jailbreak
Macruufka 8.4 Jailbreak wuxuu keenayaa war aan dhammaad lahayn, waana in horumariyeyaashu ay baytariyada si aad ah u dhigeen arrintan. Laakiin inta badan waan daalanaa sababtoo ah ma helno war nagu filan, laakiin ha walwalin, taasi waxay leedahay xal fudud. Waxaa jira keydad badan oo aan ahayn kuwa horay loo sii rakibo oo aan wax ka weydiin karno si aan u ogaanno isbeddelo cusub iyo codsiyo aad u xiiso badan. Waxaan ku siineynaa toban ka mid ah keydadka ugu habboon ee ay tahay inaad ku darto.
Sidii aan horeyba u sheegnay, liiskan waxaan ku soo dari doonaa toban meelood oo haddii aysan ku jirin iPad-kaaga oo leh Jailbreak mar hore, waa inay ahaadaan ka dib markay akhriyaan qodobadan, waxayna ku jiraan waxyaabo khaas ah oo khaas ah oo ay tahay inaad ku tijaabiso iPad-kooda. Adeegga karti-u-haynta ma laha wax siman
Chemsieser - http://apt.steverolfe.com - StatusVolX: Waxay noo ogolaaneysaa inaan tirtirno dhibaatada mugga pop-up-ka waxayna muujineysaa heerka mugga ee barta xaaladda.
Dhulkii Eliiyaah iyo Andrew - http://elijahandandrew.com/repo - Gaaritaanka: Wax badan ayaan ka hadalnay tweak-gaan ku saabsan barnaamijka 'iPad News', tweak-kan wuxuu qalabkeenna u keenayaa waxyaabo badan oo badan.
Wax soo saarka HASHBANG - http://cydia.hbang.ws - Feeromone: Wax walba waa lagu habeyn karaa Jailbreak, waana ku mahadsan tahay isbeddelkan waxaan u habeyn karnaa xitaa Cydia lafteeda.
Dib u soo celinta Ian - http://repo.cydro.us - Waqtiga Cydia.
Karen Cananaaska Repo - http://cydia.angelxwind.net - AppSync Midaysan: Gebi ahaanba lagama maarmaan in la rakibo codsiyo aan la saxiixin, taas oo ah, burcad-badeed. Noqo mid wanaagsan!
Repo-ga Pw5a29 - http://pw5a29.github.io - Xul xulis cusub: Waxay kaa caawineysaa inaad ku dhex rogto qoraalka dhexdiisa tilmaam ku saabsan kumbuyuutarka, aad u faa'iido badan.
Dib u soo celinta Ryan Petrich : http://rpetri.ch/repo - Dhaqdhaqaaqe: Waa lama huraan, xakamee iPhone-kaaga adoo tilmaamaya, fudud, fudud oo dhakhso leh.
repo tateu - http://tateu.net/repo - Alaarmiga: Waxay noo ogolaaneysaa inaan sameysano mug aan caadi aheyn oo loogu talagalay digniin bixiyaheena kana madax banaan midka uu iPad-ka haysto waqtigaas.
kooxda Kodi - http://mirrors.kodi.tv/apt/ios - Koodi: Ku-xigga XBMC, xarunta ugu dambeysa ee warbaahinta badan oo leh tiro badan oo horumariyayaal ah oo ka dambeeya.
Keydinta 46 & 2 - http://repo.fortysixandtwo.com - Tilmaam Waxay kuu ogolaaneysaa inaad qarinaysid barta aqoonsiga marka aan dooneyno inaan aragno.
Marka hadda waad ogtahay, ha ka daahin inaad ku darto meelahan cusub ilahaaga Cydia si aad ugu raaxaysato isbadalkan cajiibka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » Cydia » Tobanka xarumood ee Cydia waa inaad iskudaydaa iOS 8.4